icon - ဝစ်ရှင်နရီ
(ကွန်ပျူတာနည်းပညာ) သုံးသူအား မည်သည့်အကြောင်းအရာ အစားပြသသော အမှတ်အသား - (ပုံနှင့်ဖေါ်ပြ) ၊ (computer science)agraphic symbol (usuallyasimple picture) that denotesaprogram oracommand oradata file oraconcept inagraphical user interface
ဝတ္တူ-မြင်ကွင်း - လူပုဂိုလ္လ် တို့အား မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မျက်စိဖြင့် မြင်သာရန် ကိုယ်စားပြု ဖေါ်ပြခြင်း ၊avisual representation of an object or scene or person produced onasurface .. Syn: ikon picture, image, ikon.
အရှေ့ပိုင်း ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်းတော်တို့တွင် ရိုသေကြည်ညိုမှုကြောင့် သစ်သားပျဉ်သေးပေါ်တွင် ဆီဆေးသုံး ရေးဆွဲထားသော ရိုးရာကျ သာသနာ ပန်းချီ ၊aconventional religious painting in oil onasmall wooden panel; venerated in the Eastern Church... Syn: ikon.
"https://my.wiktionary.org/w/index.php?title=icon&oldid=769739" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇၊ ၁၄:၄၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။